Evert Jan Poorterman na mmasi na 'ihe omuma' banyere Nibiru na Annunaki: Martin Vrijland
Evert Jan Poorterman na oke ya na 'ihe omuma' banyere Nibiru na Annunaki
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 22 April 2019	• 10 Comments
Ụnyaahụ, ana m ekele Evert Jan Poorterman na akụkọ ebube Ista na mkpokọta Niburu.co. Echere m na ha na-ada ezigbo mma, ma n'ihe gbasara ọdịnaya m na-eche ma ọ bụrụ na ibu ọrụ ya na-eme ka uche ọ bụla dị. Evert Jan na-akpọsa ngwakọta nke nkwenkwe UFO na nkwenye na mbara igwe Niburu na Annunaki. Ekwuru m n'ihu na nkwenkwe na ihe ndị a na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị m ruo oge ụfọdụ. Nke ahụ bụ n'ihi na David Icke dere akwụkwọ niile gbasara ya nke dịka ihe na-adọrọ mmasị nakwa n'ihi akwụkwọ ndị Zakariya Sitchin dere. Enweghị m ike ịmepụta echiche ndị a, ma ọ bụrụ na m tụlee ya na echiche anyị na anyị bi na (simulate) (ma ọ bụ mebere) eziokwu (dịka akọwapụtara na usoro isiokwu a, ebe a en ebe a) ọ dị nnọọ ka o kwere mee na ọ bụ akụkụ nke aghụghọ nke nghọta anyị.
Ihe dị mkpa bụ na ikpe anaghị ejupụta na ihe akaebe ụgha. Na akụkọ banyere David Icke, Sitchin na Poorterman, Otú ọ dị, enweghi m ike ịnweta nsogbu, ma ọ bụ naanị ihe akaebe nke onwe ma ọ bụ nkwenye.
Dịka ọmụmaatụ, ekwuru m na mbụ na ọrụ nke Zakia Sitchin yiri ka ọ dabeere na nsụgharị nke mbadamba ụrọ ndị na-adịghị mma ma ọ bụ na-agha ụgha. Na ụwa nke ịntanetị, Otú ọ dị, ọ na-esiri nnọọ ike ịghara ịhụ ebe nrụọrụ weebụ na-akpata nsogbu, ma na-emeghachi onwe ha site na ụgha ma ọ bụ mgbagha. Ana m atụgharị anya na akụkụ ndị ọzọ nke usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na-achịkwa otu nchịkwa ike nke dị n'azụ mgbasa ozi kachasị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị jikọtara nchịkọta nke mgbasa ozi kachasị dị iche iche dịka ndị na-azọrọ na ala dị ala ma ọ bụ ịdị adị nke ndị yiri nke ahụ, ị ​​nwere ike ịhapụ nkatọ niile n'oge na-adịghị anya ma bipụta ikike zuru oke nke eziokwu ahụ gaa na mgbasa ozi kachasị.
Achọrọ m ịkọrọ Evert Jan mkparịta ụka ebe a, n'ihi na ọ na-eju m anya na ọ dị mpako na ụzọ ọ na-esi eme mkpesa. My e-mail mbụ nye Evert Jan ụnyaahụ bụ mmeghachi omume na akwụkwọ akụkọ ya nke ọ na-enye ọhụụ banyere mmalite nke nnọkọ Ista. Agwara m ya na isiokwu ya na-atọ m ezigbo ụtọ, ma enwere m obi abụọ banyere akụkọ Nibiru. Nke a apụtaghị na enweghi eziokwu ọ bụla n'isiokwu ya. Otú ọ dị, ajụjụ a bụ ma ànyị na-ahụ ebe a ịjikọta eziokwu n'ezoghị ọnụ dị ka akọwapụtara n'elu.
Evert zara ya dika:
Ọ dị mma na nke ahụ dị m mma; The Great Martin Vrijland, nke edere m na-eche na ọ bara uru ... Ọ dị mma. Achọtara m isiokwu gị dị ezigbo mkpa, ma enweghị m ike ikpebi mgbe niile ma ihe ị na-ede ziri ezi. Dịkwa ka e kwuru na mbụ; "Onye na-ekpuchi ọkụ na-agụ". Ego ahụ maka mụ na gị. Nibiroe, PlanetX, SecondSun (Schwarze Sonne - SS - nke ndi Nazi) abughi ebe kachasi ike gi. Ọfọn m ihe karịrị afọ iri atọ ... na afọ iri abụọ nke nkwadebe. N'inye ọnụ ọgụgụ nke nchọpụtara na enyere m ohere ime, ana m enwe ike ikwu na abụ m ọkachamara n'ọhịa m. Ahuma! Na oge ụfọdụ nke eziokwu, ma ịsọpụrụ nke kwesịrị! Ọtụtụ ndị na-enwe obi abụọ ma ọ bụ na kpakpando nke abụọ dị; Micky van Leeuwen site na IndigoRevolution na-esokarị m ala ma na-akatọ ihe niile banyere 'anunnaki' na akụkọ ntụrụndụ / kpakpando Nibiru. Enwere otutu ihe ngosi nke ihu nke kpakpando ahu na uzo mbara igwe ya ... na otutu ihe negosi na obu ihe obia ... na otutu ihe negosi na anunnaki di ma obu ihe negosi na ndi umengpo ndi ozo na Veluwe bi n'okpuru ala n'okpuru Fliegerhorst Deelen (nke metụtara Grik Delos - ihe omumu ndi Gris bu ihe omuma ndi Dutch n'ihi na ndi Gris oge ochie bu ndi Fris). Ereet Jan ekele
Nanị ihe m zara ozugbo. Ka m tinye ozugbo azịza m nwetara n'ụtụtụ a, nke Evert Jan dere akara ya na-acha anụnụ anụnụ.
Enweghị m echiche nke ukwuu n'ihe banyere nnukwu ma ọ bụ obere. Nke ahụ bụ akụkụ nile nke mmemme anyị. Naanị m edepụta echiche m gbasara ihe, o yikwara ka ọtụtụ ndị chọrọ ịgụ ya, ma echere m na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ga-anwụ ma ọ bụ hụ ka m nwụọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, echere m na ị pụghị ikwu na mgbe mmadụ na-amụ ọtụtụ afọ, nke a site na nkọwa pụtara na ha ziri ezi. Nke ahụ bụ eziokwu! Ma na-adabere n'ihe m kwere ka m chọpụta!Na nke gara ngwa ngwa ma soro onye ọ bụla ọzọ nzọụkwụ site nzọụkwụ ... Mgbe ahụ ndị na-eche echiche dịka Nicola Tesla ma ọ bụ Niels Bohr enweghị ike ịmalite nghọta ọhụrụ ma na-enwe mgbe ọ bụla na-arụ ọrụ ndị nkụzi nwere ọtụtụ afọ. Ị nwere ike iru na ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ ụzọ ochie, ya mere ikwu okwu, ma ọ bụ na ị nwere ike iwu akwa mmiri ma wuo ụzọ ọhụrụ.
Echeghị m na o doro anya na ị nwere ike ikwu na ị nwere ike ịhụ ọhụụ ziri ezi dabeere na afọ ọmụmụ. Kedu ihe anyị nwere ugbu a?! Naanị m na Benelux na onye ọzọ maara ihe gbasara isiokwu m. Ebe ọ bụ na m na-arụ ọrụ na nke a, achọpụtabeghị m onye ọ bụla ọzọ nyocha nke nwere ike ịgwa m ihe ọ bụla m na-amabeghị! Abụ m naanị otu n'ime ụwa ndị nwee ike ịchọpụta asụsụ nke 'UN UN NA KI'; Kwando, iwu a ma ama na iwu iwu, nke dabara adaba maka agbụrụ mepụtara, dịka ọmụmaatụ, nwere ohere njem. Abụ m onye mbụ ịhụ na e dere ederede na mbadamba ụrọ na shorthand. Naanị afọ ole na ole gara aga, onye na-agwọ ọrịa na Dutch kwuru na 'cuneiform script' nwere ike ịbụ obere edemede. O di nwute na enweghi m ihe ozo banyere ya. Ọ ghaghị ịhapụ ya n'ihi na ọ gaghị ekwe ka ịmepụta ihe ọhụrụ. Ma eleghị anya m bụ onye mbụ na naanị onye na-ahụ na ndị Dutch / Frisia si Babịlọn, Akkad na Sumer bịa. Enwetaghị m nke ahụ site na Sitchin. Ma eleghị anya, ọ bụ naanị m nwere ike ịkọwa ihe kpatara Mars ji acha uhie uhie na ọnyá na ntụpọ ọbara ọbara ahụ dị na mbara igwe Jupiter. Ya mere m nwere ike itinye ihe ụfọdụ na ruo ugbu a, ọ dịghị onye na-ahụ akwụkwọ Zakariya Sitchin. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-agbalị igosipụta na gosipụta ozizi evolushọn ruo ọtụtụ iri afọ, ma nke ahụ apụtaghị na ndị ọkachamara mmụta ahụmahụ niile nọ na egwu kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nwee ike ikwu na ha na-anọchite anya eziokwu ahụ na-adabere na afọ ndị ahụ. Ọ ka bụ usoro nkwenye nke a na-akọwapụta.
Ị nwere ike ịsị na ị bụ ọkachamara na nyocha banyere isiokwu dịka ozizi evolushọn, mana nke a ọ pụtara na ọ dịghị onye nwere ike ma ọ bụ kwesiri iguzo ọzọ bụ onye na-ajụ ozizi ahụ? N'ezie ị na-eme ya, na ezi ihe kpatara ya. Ma ọ bụghị naanị ... ma ọ bụ ihe i mere - nye anyị vidiyo nke otu elekere na ọkara ka anyị wee chọpụta ihe nkwenye siri ike bụ akụkọ Sitchin. Akuko a bu nke ndi ozo ... ma gi onwe gi na akwado ya. Ezigbo, ị nwere ike, ma deezie eziokwu ma gwa ndị na-agụ akwụkwọ gị ihe ị na-ahụ, chee echiche ma chee echiche dabeere na vidio a. Ndị na-agụ akwụkwọ anyị agaghị ahụ ma ọ bụ chọpụta na n'ime akụkọ ahụ. Ya mere ị ghaghị inyere anyị aka.
Ya mere ekwenyeghm na okwu ndi di ka 'onye okachamara' ya mere obugh na 'icho akwukwo onu ahia'. Abụ m. Ị nwere ike ịnwe echiche banyere ụdị dị iche iche, mana ma ị nọ na egwu ahụ bụ abụọ. Nwatakiri n'ime obere chaa chaa nke nwere nnu snotty na imi ya nwere ike isonye na mkparita uka a, oburu na o nwere ike ime nke a! Ọ bụrụ na ị na-ele Nieuwsuur ị ga-ahụ ndị ọkachamara na-eyi ọha egwu, ndị ọkachamara America, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara a, b ma ọ bụ c. Ị na-ekweta mgbe niile? N'ezie, ọ bụghị! Ka ị chere na ị gaghị akatọ? O doro anya na m nwere ike nyochaa ma chọpụta ihe a na-atụle ma dabere na nghọta nke m, ihe ọmụma na nyocha ma nwee ike itinye onyinyo m na ọhụụ m ... mgbe ahụ, m na-etolite otu ugboro wee kwuo oké olu n'ime ụlọ ahụ; 'Ụyọkọ bruises na losers' ... ma gbanwee gaa na ọwa ọzọ. Karịsịa ugbu a na mkpọtụ banyere ihu igwe! Dabere na ọnọdụ gị, azịza nye nke a kwesịrị ịbụ "ee, enweghị m ike ịkatọ". M na-eche ma ị ga-etinye ya n'ime onwe gị. Ya mere anaghị m etinye aka n'ihe m na-agụ, n'ihi na enweghị m ọgụgụ ma echere m na ezi ihe ọmụma nwere ike ịmalite site n'iwepụta ihe mkpuchi ahụ site na ịgụ ya ma tinye onye nwere ọhụrụ ọhụrụ n'ọnọdụ onye nwere ike iche na ngwaahịa enwere ike ime ka amara na dị iche iche. Otu ihe a gbasara akụkọ, akụkọ ihe mere eme, okpukpe na ihe ndị ọzọ. Ahụmahụ ọtụtụ afọ adịghị adabere n'echiche ziri ezi banyere okwu ahụ. Ọ fọrọ nke nta ka ị kwenye na m. Kwenye ekwenye ...
Enwetala m ebe nrụọrụ weebụ nke na-akatọ akwụkwọ nke Zakia Sitchin ma jụọ ihe ị na-eche banyere ya. Hụ na mbụ ...
Eziokwu ahụ na achọtara m okwu gị na-adọrọ mmasị apụtaghị na m chere na ọ dị mma. Otú ọ dị, achọrọ m na ọ na-adọrọ mmasị, n'ihi na ị maara na ị ga-enwe mmasị n'ọtụtụ ndị na-agụ ma na m mata ihe ndị nwere ike ịnwe eziokwu nke eziokwu. Naanị m na-eche ma ọ bụghị ngwakọta nke eziokwu na (consciously ma ọ bụ) desinfo. Ọ bụ ihe mejupụtara m ... Ụfọdụ echiche nwere ike ịdọrọ dị mma ma ọ bụ mmasị. Site n'ichepụta na ị chọrọ ọtụtụ iri afọ nke ọmụmụ iji ghọta ya, mmetụta nwere ike ịbụ na ndị mmadụ weghaara ya na-enweghị nyocha ibu arọ nke akaebe n'onwe ha. E kwuwerị, ọtụtụ ndị enweghị oge maka nke ahụ ... ma ọ bụ uche na ihe kpatara ya!
Ana m achọsi ike banyere ihe ndị ahụ, ihe ngosi dị ịrịba ama nke ịdị adị nke Nibiru na, dịka ọmụmaatụ, nke ala dị n'okpuru Fliegerhorst Deelen. Ị nwere ihe akaebe doro anya nke ndabere ala ma ọ bụ na ọ dabeere na akụkọ ndị mmadụ? Mmetụta na ịmara na ọhụụ na nkwupụta ndị ọzọ. Arnhem / Velp bụ hotspot n'afọ '60 na' 70, yana Deelen Airport. Ndịàmà na-ahụ ọkụ, ihe na-efe efe (UFO) na dịka otu nna nke otu onye m maara, bụ onye na-elekọta Velp n'oge ahụ, ekwentị na-acha uhie uhie n'ihi akụkọ. Enwere ike ịnweta ala dị n'etiti Arnhem na Velp (dị nso pyramid na Velperbroek). A ga-enwe ihe iri dị n'okpuru Deelen Airport. Ala abụọ dị elu ma buru ibu karịa nke ọzọ na ụgbọ elu abụọ dị na mita 200 dị mita! Ndị isi agha Dick Berlin (German) ghọrọ onye so na Board nke ndị isi nke Hoge Veluwe National Park na Museum Kröller-Müller (Germany) ozugbo ọ lara ezumike nká. Kedu ihe onye agha mbụ mere n'ebe ahụ na Veluwe? Ndi nwoke ahụ na mberede ghọrọ a ọdịdị n'anya na nkà connoisseur ?! Ma ọ bụ, ọ ga - eme nleta na-enweghị iwu na ala ala (iji nata ntụziaka sitere n'aka 'chi' ahụ ?! ... dịka Adolf Hitler (German) mere ugboro atọ?!). Berlin von Uhm (German) nọ na Berlin. Mgbe ọ lara ezumike nká, o meriri Dick Berlin na Board of Directors nke Hoge Veluwe National Park na Museum Kröller-Müller. O doro anya na Pita nwere mmasị na ọdịdị na nkà. Echere m na anyị nwere ike ikpochapụ Arnhem / Velp isi na ụlọ ọrụ Bilderberg dị nso Oosterbeek, Fliegerhorst Deelen, ebe dị n'okpuru ala, obere 'bigfoots' ma ọ bụ 'ndị wolf' hụrụ na Veluwe, ọnụnọ 'eze' 'dị nso na Apeldoorn, ụlọ nsọ oge ochie nke a raara nye Apollo (ya bụ Apeldoorn aha ya), agịga, ụlọ Loo, Hoog-Soeren (yiri ka ọ bụ ebe siri ike), Ronde Huis,' wodanseiken 'na Ulo na ebe a na-eli ozu, ụzọ ụzọ na Drie / Wekerom na ọbụna karịa. The ndị ọbịa na-rustling n'ebe ... hahaha! Ma ihe banyere oru Madonna na Gelrdrome n'oge ahụ ... O bi n'ime ụlọ dị na Bilderberg Hotel wee gaa n'ebe ahụ site na Prince Charles na Queen Beatrix. Ndi niile n'ime ha nwere ezigbo ihe ogwu? Anyị amaghị ma Bilderberg Hotels (n'ụwa nile) na-eyi ka ọ mechibidoro otu nku maka ndị ọbịa nkịtị, mana ọ bụghị n'ihi ndị ọbịa a na-atụghị anya (shapeshifters?? Reptiles?!). Arnhem, Gelre, dragọn ahụ nke onye agha gburu site na ... ka onye agha ahụ na-agbanye ube ya n'ime obi nke dragọn, anụ ọhịa ahụ mere mkpesa ahụ; 'Gelre, gelre, gelre' ... Gelre na primordial asụsụ Kwando na-aghọ GE EL RE>, nke pụtara; 'rube isi-El / ellipse / na-agbanwe /'G'enwe ihe' ma obu GELRE nwere ihe jikotara 'ige nti', ya mere nzaghachi ... na ihe ma obu onye na - aru ​​mgbe nile ... nke ahu bu kpakpando nke abua nke gafere 3600 maka otutu afo ... ma nwezie ihe ime ya na 'dracos' dị na Veluwe? Anyị amaghị otú ahụ na-echeta na ikekwe ejikọta na ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya na Veluwe. N'ime mgbanwe ahụ, anyị na-ahụ ER LE EG <nke pụtara; 'ọla / bara uru-ndụ-ọbụna', ma o nwere ike inwe ihe jikọrọ ọla (ọlaọcha) dị oké ọnụ ahịa (gold) na 'UN UN NA' (German) m ebe a ma zigara ụwa ha ... ma ọ bụ ọ bụ banyere 'ọkụ' na Veluwe na n'oge ochie ferruginous gbazee. Ụmụ nwoke na ụmụ nwoke (goblins? Kobolters?), Obere ihe amphibious reptiles nke wuru n'elu ala ma eleghị anya?
Dịka ọmụmaatụ, David Talbott (onye na-aga n'ihu ọrụ Immanuel Velikovsky) anaghị ekwenye na Nibiru dị adị. Ị na-ezo aka n'ọrụ Velikovsky. Kedu ka ị si etinye ya? Immanuel Velikovsky amaghị na adị nke kpakpando nke abụọ. Ya mere ị gaghị achọta ihe ọ bụla n'ime akwụkwọ ya. Na-egosi maka ịdị adị ya! Dịka ọmụmaatụ, 'mmiri mmiri' dị kilomita na-acha ọkụ ka kpakpando ahụ na-agafere, dịka n'oge Ọpụpụ ... na Oké Osimiri Uhie kpochapụrụ nwa oge. Ruo ụbọchị atọ (ndị a bụ ụbọchị atọ na Jizọs nọ n'ili ya.) Mgbe ụbọchị atọ gasịrị, Jizọs biliri). Jizọs bụkwa otu n'ime ọtụtụ aha maka kpakpando nke abụọ. Velikovsky ekwe ka emee site na comet ... na echere m Velikovsky's comet bụ kpakpando nke abụọ. Ma ọ bụ ụwa Nibiroe si Sitchin. Naanị ihe ọmụma ahụ amabeghị n'oge ya. Na nkenke, mgbe Sitchin bipụtara akwụkwọ ya na 1976.
Onye na-eme ihe nkiri na-ezo aka ná nzaghachi ya isiokwu a site n'aka m, nke m nyere m ihe ngosi nke awa atọ nke na-eme ka ibu ihe akaebe nke Zacharia Sitchin kwụsị. Evert Jan echeghị na ezuru. O nwere ike iche na aghaghị m imepụta mbadamba ụrọ m onwe m, ma ajụjụ ahụ bụ ma ọ nara nsogbu iji lelee vidiyo ahụ. Na vidiyo ahụ, a kọwara ya site n'ọzọ site na nrụrụ nke Sitchin na ndị ọzọ abụghị ihe eziokwu ma ọ bụ na-ezighi ezi. M ghọtara na Evert Jan chọrọ ka m tinye ya niile site na nkwụsị, mana enweghị m oke mpako dịka Evert Jan ma ekwenyere m na ị bụ onye na-agụ ihe nwere ike ịchọta ya na vidiyo a nke ọma, na-enweghị ntụgharị ya. Echere m na ọ bụ ihe arụmụka iji tụba ya. Ọzọkwa, Evert Jan na-emegide onwe ya site n'ikwu na ala nke paragraf 5 na ọ kwadoro m kpamkpam, ebe ọ na-ekwenyeghị m n'ebe ahụ, mana m na-ekwu otu ihe ahụ.
Kedu aha n'aha Poorterman? Onye nche ọnụ ụzọ? Evert Jan biaghachiri na mmeghachi omume ya banyere akụkọ banyere okwu àmà na gnomes, mana ọ bụrụ na ị lere anya na ihe ederede n'okpuru, ị ga-achọpụta na ọ bụghị mgbe nile ka anyị ga-anakwere akụkọ n'enweghị ihe ọmụma. Evert Jan doro anya na ọ na-eche na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ ya 'enweghị uche ma ọ bụ nghọta' iji nyochaa ihe, ma ọ ka na-ebipụta otu ihe gbasara Nibiru kwa izu. Ya mere o yiri ka ọ na-eche na ị nabatara ya site na ya ma enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe kpatara ya iji lelee onwe gị. M onwe m na-ahụ na ọ bụ ihere na ị na-abịakwute ndị na-agụ gị na mpako dị otú ahụ.
Maka ezigbo nghọta na n'ihi na m chere na ị nwere ezi uche na ihe mere ị ga-eji ghọta ọdịnaya ahụ, m ga-etinye vidio ahụ ọzọ nke akọwawara ya otú ọtụtụ ndị edemede buru ibu na-ekwukarị ihe efu. Otú ọ dị, m nwere ike iche n'echiche na ị gaghị enwe oge iji lelee anya ruo awa atọ, mana kama ịmepụta ihe nkiri Hollywood na ngwụsị izu, ị nwere ike ịchọrọ iwepụta oge maka ihe dị omimi karị. Ikekwe, Evert Jan nwekwara ike ịzaghachi ọdịnaya a n'otu oge, kama iji ya na-agwụ ya "n'ihi na adịghị m etinye ihe ọ bụla site na nkwụsị site na nkwụsị). Kama nke ahụ, ọ bara uru ile ihe anya na-akwado, na-eme ka ederede a bụrụ ụdị kacha mma. N'ezie ọ na-emetụtakwa ebe a na anyị ga-eche banyere ozi nke ndị ọzọ, n'ihi na mụ na gị agaghị achọta oge iji kọwaa, dịka ọmụmaatụ, mbadamba ụrọ Sumerian, ma ọ dịkarịa ala, ọ bara uru ịmụ akụkụ nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Evert Jan, chee na 'steno' (ịhụ mmeghachi omume) nke mbadamba ụrọ ndị ọ chọpụtara na-ekwu banyere Nibiru na Annunaki? Nke a nwere ike iji ihe akaebe gosipụta nke a na maka 'enweghị uche ma ọ bụ uche' dịka ịchọta eziokwu?
Ọ bụ ịdị adị nke 12e planet wepụrụ? Ọ bụ adịgboroja Annunaki? Mba, ọ bụghị. O nwekwara ike ịbụ na ndị mmadụ dịka Sitchin bụ ndị nche ọnụ ụzọ na-ejikọta eziokwu n'echeghị echiche. O nwekwara ike ịbụ na ha kwenyesiri ike na ya. N'ọnọdụ ọ bụla, akụkọ ndị ahụ nọgidere na-enwe mmasị dị ukwuu. M na-ahụkwa ha nke na-adọrọ mmasị, ma mgbe ụfọdụ, ị ga-enwerịrị ego iji hụ ma ọ bụrụ na ha abụghị akụkọ na-atọ ụtọ. Onwe m, m na-achọ inweta ihe ndị ọzọ site n'akụkọ ihe mere eme nke a iji lee (pịa njikọ ahụ). M na-adụkwa gị ọdụ ka ị nyochaa ya n'onwe gị ma ghara ịnakwere ihe ọbụla. Nke ahụ na-emetụta ihe niile m dere.
Kedu ihe bụ eziokwu banyere Zakia Sitchin na Erich von Däniken ihe akaebe nke ịdị adị nke ndị mba ọzọ dị ka Annunaki?
UFO ndị na-agbapụ na ígwé ojii ma ọ bụ Adobe After Effects?
Ịdị adị nke extraterrestrials na UFO
Tags: ndị ọbịa, Evert Jan, agba, Nibiroe, Nibiru, Niburu, Akụkọ Ista, ala, Onye na-emepụta ihe, Sitchin, UFO, UFO, nkọwa, Velikovsky, Zaria
Nke ka na-ejikarị m.
Nakwa ekele gị martin iji hụkwuo ka anyị mụtara.
Tinyere vidio a nke nyere m echiche dị iche iche na anyị abụghị nke ahụ
ma ọ bụrụ na a na-ekwu nke a taa.
Ị ga-enwe ndidi na vidiyo ahụ
Mgbe ahụ ị ga-abịa na-akọwa 2 ma ọ bụrụ na ndị a (ugwu) gbahapụrụ.
Ntak emi kpukpru ndise emi ikenyeneke ndifiak ke Egypt eset? onye maara pyramid?
Kedu ka e si gbaa ya, olee otú e si gbaghaa ọ pụtara na anyị na-emeso mmepeanya ka elu karịa ugbu a?
Ma ọ bụ ọ pụtara na ha dị nnọọ ka anyị dị ugbu a, ma ọdịdị ahụ emeela ka mgbagwoju anya dị ike n'ihi na ọ na-ama jijiji?
Onye maara ma ihe ị ga-eche banyere na ị nwere ike bụrụ ihe na-ezighi ezi.
Hi Martin, ekwuola m otu ugboro banyere onye ahụ na-ahụ maka ihe nkiri a
Na-elegide ya anya ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Akara akpụkpọ anụ na-eche nnọọ ihu na akpụkpọ anụ Aryan nke atọ nke atọ. Anaghị m atụkwasị ya obi maka mita ...
Ugbu a, anyị eruola ebe anyị maara na ụwa a bụ nkwughachi / nro. Oge ọsọ na-egbu oge ka ị nweta oge na ihe onwunwe. Ònye kere ụwa a na onye ọ bụ na ebe ọ na-ebi ndụ na nke ahụ dị mkpa n'ezie? Ọfọn ọ bụrụ na anyị na-enye ya ike anyị site na ịmalite na n'oge gara aga. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị na-alụ ọgụ maka anyị maka ya, chi a na-agafe. Ma aha ya (aha nwoke na nwanyi) bụ Allah, Annunaki, Elohim, chi, Zeus, Isis, Maria na ihe ndi ozo adighi mkpa. Mgbe anyị na-atụgharị ahụ anyị n'ime ụlọ nsọ maka nsọpụrụ nke mbụ, ụwa nke ịghọ aghụghọ na-akwụsị. Ị hụrụ na ọ na-eme, naanị anyị ga-eme nhọrọ ma na-ekwu okwu ọma maka ụwa ochie.
Ihe niile gbasara mmezi nke mkpụrụ ndụ gị (DNA) na ndị na-abịa site n'elu. Ọ bụ ike, anyị na-abanye na firewall ma ọ bụ na mbụ?
Martin M ga-agbachi ya. Naanị ihe nke gị na ihe ndị ọzọ niile bụ ihe ndọpụ uche.
Ozizi evolushọn bụ ụgha! ọ dịtụbeghị mgbe e gosipụtara "ụdị dị n'etiti" nke gravestones (ndị ọkà mmụta ihe ochie) hụrụ!
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkọwa ya, kwuo "nnukwu ọganihu".
Ọ bụ ihe mgbagwoju anya na ọ bụ obere ndị pyramid na ndị dị otú ahụ wuru ha. Ekwenyesiri m ike na ụwa dị nká karịa ka ha mere ka anyị kwere. Ekwenyere m na Niburu na-agafe na 3600 afọ iji tọgharịa ụwa. Ekwetaghị m na e nwere chi dị na mbara ala a, nke a bụ nnọọ mbara ụwa jupụtara ike nke na-ebute ngbanwe.
Akụkọ ndị a na-eme ka òtù ahụ mepụta anwansi tupu ihe ọmụma amaliteghachi ịbụ ndị isi nke ọgbọ ọhụrụ. Ihe dum UFO na ndi si n'elu bia bu ihe omuma.
E kere ihe niile site n'echiche anyị!
Ndị mmadụ nọ na-ebuwanye ibu n'ihi na 7 oyi akwa ozone dị arọ, e mere nchọpụta nke a na ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara. Ihe omuma m na-achọta nke a bụ nkọwa ezi uche dị na ya, m na-etinye uru karịa ya karịa nkwenye sayensị. Tụkwasị na nke a, nke a na-akọwa na dinos na-apụ n'anya nakwa na ihe niile dị n'ụwa dị oke. Ogwe ozone na-agbakeghachi ọzọ, ohere a dịkwa oke elu na ihe niile ga-akawanye ibu ma ọ bụghị naanị ndị Dutch.
Ọ bụ ya mere o ji dị mma na ị na-egosi na anyị aghaghị ịdị na-eme mgbanwe n'inweta ihe ọmụma ma ghara ịbanye n'elu ịnyịnya.
Enwetara m ụzọ na ewepụwo m ọtụtụ ozi n'ebe niile ma ewepụsịla m ihe kachasị mma ma nwee akụkụ ndị bara uru n'uche m.
Kedu ka m si mara ihe bụ eziokwu ma ọ bụghị: Intuition!
Ọtụtụ ndị ga-ekwu nke ahụ, ma na-elekwasị anya na nghọta nke onwe gị ma mesịa nwee ike ime ka ihe mgbagwoju anya ahụ pụta.
Ekwela ka ndi ozo tinye uzo a!
Evert-Jan ekweghị ile vidio nke Sitchin chere kpamkpam 😉
M ga-etinye ya na haha.
Naanị lee anya na Evert, n'ihi na a na akwado ya na ngosipụta vidiyo na nke ahụ bụ ihe siri ike ịpịpụta.
Ma eleghị anya, ọ na-ajụ ịnara mmanụ Orlando na CBD na colloidal ọlaọcha, ọ na-amalite usoro ọ bụla ọ na-eche na ọ na-arịa ọrịa. A sị ka e kwuwe, ekwenyesiri m ike na ụzọ abụọ a ma mee ka ọlaọcha colloidal m.
Ma m ga-ekwu na echere m na saịtị ebe ahụ nwere ezi ebumnuche ma e wezụga maka nkwalite ufo. Ha na-enweta nke a na-enweghị atụ na imebi akụkọ ndị ọzọ bara uru.
Evert-Jan na-ekwu na obelisk ga-anọchite anya roket, na ọ ghaghị ịnọchite anya mpempe akwụkwọ, ọ dị mma. Ọ bụ antenna nke ga-eziga ike ma ọ bụ orgasm maka chi / ụlọ / elves abụọ.
Flying saucers ga-abata n'ụwa a, mana ha na-ebido n'ụwa a ma ọ bụghị site na mbara ụwa ndị ọzọ. Ekwenyere m na e nwere naanị otu ụzọ na nke ahụ sitere na ụzọ ọmụmụ maọbụ site na ọnwụ. Otu a na-aga maka akụkọ na Annunaki chọrọ ọlaedo anyị iji weghachite ikuku nke ụwa ha. Akụkọ a bụ ihe atụ na ọlaedo ga-egosipụta ume ndị mmadụ tinyere n'ime ya. Anyị bụ aṅụ na-arụ ọrụ maka ego / gold / mmanụ aṅụ na obelisk / amụ na-emepụta ụmụ ọhụrụ (na-ekwu Samsung / Saturn Galaxy, ihe nnọchiteanya gala nke x na y).
Ọ bụrụ na nnukwu oghere ala, ha na-arụ ọrụ nke ọma, m ga-eche ruo mgbe m hapụrụ ọkpọkọ.
Iji ghọta ihe niile ị na-amụtaghị n'asụsụ primal, ị ghaghị ịṅa ntị.
Gbanwee ihe niile iji Energy, ya mere ana m ewere oke ehi.
Ọ bụ ebumnuche nke ịmegide mmegide nke akụkụ nke eziokwu n'ezoghị ọnụ. Ọ bụrụ na onye na-ewe nsogbu ahụ na elele oge 3, ọtụtụ na-aghọ doro anya banyere ihe efu ahụ.
Ya mere bia na Evert Jan .. i nwere ike ime ya!
mfe dere, sị:
Evert-Jan bụ onye eccentric pụrụ iche nke na-agbaso eziokwu nke ya, enwechaghị anya na ntị maka eziokwu dị ya gburugburu. Oh ihe ihe m na ekwu ugbu a .... ya bụ eziokwu. Ma m jiri eluigwe ...? Oh oh, EJ nwere echiche doro anya banyere nke ahụ.
Ọtụtụ afọ gara aga, amatara m EJ nso, ma kemgbe ahụ, ahụtụbeghị m onye ọ bụla nwere echiche kagburu onwe ya karịa ya. Oge ọ bụla ị rịọrọ ka e nye gị ihe ọmụma ma ọ bụ ibu ọrụ nke ihe àmà ya, ọ na-ezo aka na afọ 30 nke ahụmahụ na nchọpụta ya. Oh yes ... 10 afọ gara aga, nke ahụ bụ 30 afọ nyocha. Ya mere, o doro anya na ndekọ a zuru ezu na-agbadosie ike na oké ọkọchị. M onwe m na-atụfu ihe ndekọ ahụ n'oge ụfọdụ wee malite ịchọ ụda dị iche, na mgbe ọ na-adịghị mma.
Na nke na-akpali m mgbe niile na EJ na echiche ya ... Gịnị mere ọ bụ naanị onye yiri ka ọ maara ihe niile banyere nke a (okwu nke aka ya), gịnịkwa mere o ji nwee ihe ọmụma na amamihe iji kọwaa ozi onye elu a bụ? ike bụ, ụwa ndị ọzọ dị oke nzuzu ma karịa obere ntakịrị iji nweta ihe ọmụma a.
Enwetara m nzaghachi na EJ na-egosipụta n'elu mgbe niile. O juputara na ngbaghoju anya dika Martin n'onwe ya choputara, ma echere m na ihe isi ike nke EJ bu na o ghaghi ibu ụzọ muta iguta ihe nke oma ma kpughee ihe o guru tupu ya aruta onwe ya!
N'ikpeazụ, echiche nke m bụ na EJ nwere ike ịkọ akụkọ mara mma n'oge ọkụ ọkụ ahụ ma ghaghị itinye aka na ya. Na-enye onwe gị dịka akara ngosi sayensị kachasị elu na-achọghị ige ntị ma lee echiche nke ndị ọzọ ... olee ụdị onye na-eme nchọpụta ị bụ?
" Mgbe gọọmentị na-amalite mgbasa ozi ọha na eze maọbụ internet n'ịgba mpi (dịka ndị nọ na Sri Lanka), ị maaraworị nke ọma
Ọkụ Notre Notre Dame: ule nke ji ọkụ ọkụ 5 mee ihe maka minit ole na ole na-acha ọkụ ọkụ nke 300 (akọrọ) »
Nleta nile: 12.410.115